Miomana Amin’ny Otrikaretina “Zik-V” Mandrahona Azy Ny Mponina Ao Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2016 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, bahasa Indonesia, 日本語, English
“Aedes aegypti eo amin'ny tànana”: sarin'ny AFPMB, nampiasàna ny lisansa CC By-NC-ND 2.0
Miahiahy fatratra ireo mpanao aterineto, mikasika ny fahasalaman'ireo vehivavy bevohoka eo amin'ny faritra, hatramin'ny nanamafisan‘ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana Breziliana ny fisian'ny rohy teo amin'ny otrikaretina Zika azo avy amin'ny moka sy ny tranga marobe mikasika ny fahasimban'ny atidohan'ireo zaza ambohoka teo amin'ny firenena (maherin'ny 3.500 ireo tranga teo anelanelan'ny volana oktobra 2015 sy janoary 2016.
Heverina ho toy ny mpandrahona ny fahasalam-bahoaka any amin'ireo faritra maro ao Karaiba io aretina io ankehitriny. Ny herinandro talohan'ny 20 Janoary lasa teo monja, nametraka torohevitra vonjimaika momba ny fivahinianana mifandraika amin'ny otrikaretina ho an'ireo firenena 14 manerana an'i Amerika Afovoany sy Atsimo ary ireo faritra ao Karaiba, ny Ivon-toerana mikasika ny Fanarahamaso ny Aretina.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy na fanafody na vakisiny fanefitra amin'io aretina io. Tsy araka ny tokony ho izy ny isan'ireo zazakely any ambohoka tratr'ilay tsimok'aretina kely ny atidohany eo am-pahaterahana, mitsahatra tsy mitombo ara-dalàna miaraka amin'ilay zazakely ny atidohany, voafetra ny fitomboan'ny sainy sy ny fibaikon'ny hozatra vokatr'izany. Maty vokatr'io aretina io ny sasantsasany amin'ireo zazakely.
Ny bilaogim-paritra Repeating Islands dia nitatitra vao haingana fa nahitana tranga voalohany tamin'io tsimok'aretina io i Porto-Rico. Pedro Pierluisi, solontenan'i Puerto Rico ao amin'ny Kaongresy, nanome torohevitra hoe “tokony tohizan'ny olona ny fandraisana ireo fepetra iraisana mba hiadiana amin'ny kaikitr'ireo moka, toy ny fampiasana ny fampandosirana sy ny fitondrana pataloha lava ary ny akanjo lava tanana”. Nanamafy ihany koa ny lahatsoratra fa voakasika ihany koa ireo tanàna hafa eo amin'ny faritra, toa an'i Surinam sy ny Repoblika Dominikana:
Araka ny tatitra irao tao amin'ny Loop Suriname ny herinandro lasa teo, rehefa voamarina ireo tranga voalohany, nilaza ny filohan'ny Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP, tranom-pitsirihana iray) fa olona an'arivony maro no mety ho voan'io aretina afindran'ny moka io.
Raha vao tratry ny aretina ireo mponina tao Karaiba, nandray andraikitra ny Sampana misahana ny fahasalamam-bahoaka ao Karaiba(CARPHA), nanolo-kevitra ireo mponina mba hiaro-tena amin'ny kaikitry ny moka ary hahazo antoka fa tsy ho toerana hitomboan'ny atodi-moka ireo fonenany. Mihevitra mihitsy aza ilay fikambanana ny handefa lalao amin'ny finday, antsoina hoe Zap-a-‘quito, mba hampianarana ny vahoaka momba ny moka Aedes Aegypti sy ireo toerana tena fitomboany ; notsindriany koa fa loza mitatao amin'ny “fahasalamana, ny fizahantany, ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena” ao Karaiba, ilay otrikaretina.
Nanomboka ny volana jona 2015, nampitandrina ireo olom-pirenena ny minisitry ny fahasalamana tao Trinidad sy Tobago mba handray ireo fepetra hiadiana amin'ilay otrikaretina. Vao ny volana novambra 2015, nanomboka nahamarika loza mitatao i Jamaika. Rehefa avy niatrika fiparitahan'aretina goavana mikasika ny Chikungunya ny taona 2014, tsy te-hotampohin-javatra tsy niomanana indray ireo tompon'andraikitra. Efa namoaka fanambaràna mikasika ilay otrikaretina Zika mihitsy ny minisitry ny fahasalamana.
Nanao tatitra ny The Jamaican Blogs tamin'ny herinandron'ny 20 Janoary fa nanome torohevitra ireo vehivavy bevohoka ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana mba hanao fizaham-pahasalamana isan'andro noho ny fandrahonan'ny “Zik V”, araka ny fiantsoana azy ao amin'ny nosy:
Araka ireo tatitra mitondra mankany amin'ny Zik-V sy ny fahakelezan'ny atidoha, fangirifirian'ny atidohan'ny zaza ambohoka izay mety hahatonga ny fahataran'ny fitomboan'ny atidohan'ilay voakasika, nanoro hevitra ireo vehivavy ny minisitry ny fahasalamana mba tsy hitondra vohoka ato anatin'ny 6 hatramin'ny 12 volana.
Nampahery ireo izay efa bevohoka ihany koa ny minisitra mba handray ireo torohevitra fanampiny mba hisorohana tsy ho voan'ny kaikitry ny moka, indrindra fa hoe misy ny rohy eo amin'ny aretina vokatry ny otrik'aretina Zik sy ny fahakelezan'ny atidoha
Nilaza ny minisitry ny fahasalamana, Horace Halley, fa na tsy misy aza ny porofo azo tsapain-tanana, ireo marika avy ao Brezila sy ny torohay avy tamin'ny Organisation Pan-Américaine de la Santé/Organisation Mondiale de la Santé (PAHO/OMS) ary ireo mpiaraka mombon'antoka ara-teknika dia ampy tsara ho an'ny minisitera mba handraisana io fepetra io, hikarohana izay hisorohana ny vokadratsy rehetra eo amin'ireo vehivavy bevohoka.
Miha-manantona an'i Jamaika ilay otrikaretina rehefa avy nitranga tao Haiti.